Bahamas wuxuu ku dhisaa Fursadaha Duulista Guud 2021 EAA AirVenture Oshkosh Show
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bahamas Breaking News » Bahamas wuxuu ku dhisaa Fursadaha Duulista Guud 2021 EAA AirVenture Oshkosh Show
Aviation • Bahamas Breaking News • Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
VIP Helicopter Tour - Madaxda EAA waxay bixiyeen Bahamas Wasaaradda Dalxiiska & Hawlwadeennada Duulimaadyada diyaarad helicopter ah oo ku yaal dhulka EAA AirVenture Oshkosh, si ay indhaha shimbir uga eegaan kumanaanka diyaaradood iyo martida ka soo qaybgalaysa 'Bandhigga Duulimaadka ugu Weyn' ee adduunka. Sawirka bidix ilaa midig waa: Reginald Saunders, Xoghayaha Joogtada ah iyo Ellison “Tommy” Thompson, Ku -xigeenka Agaasimaha Guud. Lahaanshaha sawirka BMOTA.
“Saraakiisha Wasaaradda Dalxiiska & Duulista Hawada ee Bahamas (BMOTA) waxay si firfircoon u raadinayaan fursado ganacsi oo cusub halka loo socdo halka 2021 -ka Tijaabada Diyaaradaha Tijaabada (EAA) AirVenture Oshkosh Show ee Wisconsin,” ayuu yiri Ellison “Tommy” Thompson, Ku -xigeenka Agaasimaha Guud, BMOTA.
Kooxda Wasaaradda Dalxiiska ee Bahamas waxay la kulmaysaa wada -hawlgalayaasha warshadaha duulista iyo warbaahinta.
Dad badan oo booqday Bahamas booth ayaa wax ka weydiiyay duuliyeyaashii maalin walba ka soo qeyb galayay Siminaaro Bahamas loogu talagalay.
Barnaamijyada wadajirka ah si kor loogu sii qaado oo kor loogu qaado astaanta Bahamas ee suuqa waxaa ku jiri doona ballaarinta isgaarsiinta dhijitaalka ah iyo helitaanka maareynta hantida.
“Waxa u dheer xiisaha sare ee ay muujiyeen dadka doonaya booqo Bahamas at our booth, waxaan ka helnay weydiimo aad u badan duuliyeyaashii ka soo qeyb galay siminaaradeena maalinlaha ah ee Duullimaadka Bahamas, oo si gaar ah loogu talagalay, iyo yaa aWaxaan qorsheynayaa inaan u duulo Bahamas. ”
“Afar maalmood oo ka mid ah bandhigyada toddobada maalmood ah, waxaan horey ula yeelannay qaar ka mid ah kullamo wax-ku-ool ah oo hal-hal leh madaxda warshadaha muhiimka ah sida Ururka Duuliyeyaasha Diyaaradaha (AOPA), barnaamijyada wadajirka ah si kor loogu sii qaado loona wanaajiyo astaanta Bahamas ee suuqa iyo 400,000 oo xubnood oo tijaabo ah si loo kordhiyo dadka soo booqda. Barnaamijyadan waxaa ka mid noqon doona dadaallada suuq -geynta wadajirka ah, ballaarinta isgaarsiinta dhijitaalka ah, helitaanka maareynta hantida, iyo kuwo kale, ”ayuu yiri.
“Ma dhayalsan karno ahmiyadda joogitaankeenna goobaha sida Oshkosh ama qiimaha si toos ah ula shaqaynta, fool-ka-foolka hoggaamiyeyaasha AOPA, Iskaashiga Federaalka ee Caalamiga ah (IFP), EAA, Hawl-wadeennadayada Ku-saleysan Go’an iyo Safiiradeenna Duullimaadka Bahamas. Cilaaqaadyadani waxay gacan ka geysteen sidii Bahamas loo gaadhsiin lahaa booska ugu sarreeya, oo ah hoggaamiyaha Duulista Guud ee Kariibiyaanka, ”ayuu ku celiyay Thompson.
“Sida madalkani uu na siinayo fursado u gaar ah koritaanka, waxay sidoo kale nagu baraarujinaysaa inaan maqalno gacmaheenna, arimo kasta ama xaalado iman kara oo duuliyeyaashani la kulmayaan kuwaas oo caqabad ku noqon kara go’aankooda ah inay booqdaan meesheena quruxda badan.”
Xilliga Wareegga oo Dhamaystiran - Safiirka cusub ee Bahamas Flying, Steveo Kinevo, oo ah duuliye caan ah iyo saamayn ku leh warbaahinta bulshada oo VLOGs dhammaan duullimaadyadiisa Bahamas ee YouTube -ka malaayiin daawadayaal ah, ayaa joojiyay baashkii Bahamas ee Oshkosh. Sannadkii 2018, Steveo ayaa la helay isagoo jooga Oshkosh waxaana loo magacaabay Safiirka Bahamas Mr. Thompson, kaasoo xafiiska dejin doona Ogosto 27, 2021 kadib 43 sano oo uu joogay BMOTA. Bidix ilaa midig waa: Greg Rolle, Agaasimaha Sr., Verticals and Aviation; Reginald Saunders, Xoghayaha Joogtada ah; Steveo iyo Ellison “Tommy” Thompson, Ku -xigeenka Agaasimaha Guud. Lahaanshaha sawirka BMOTA.
“Bandhigan, waxaan ku ogaanay in ogeysiis ku filan aan la siin duuliyayaashii fulintii $ 9 ee maamulka garoonka diyaaradaha Bahamas oo ah khidmadda amniga ee $ 2 kaas oo laga qaado diyaaradaha gaarka loo leeyahay iyo qof kasta oo imaanaya caalamka. In kasta oo khidmadda lagu kordhiyay dhowaan $ XNUMX oo ay ka jirtay Bahamas sanado badan, daahfurnaanta xeerkeedu wuxuu ahaa mid aan is -waafaqsanayn, fulintiisuna waxay dhaqan gashay wax ka yar bil ka hor. Hore u socoshada, waxaan ka shaqeyn doonnaa sidii aan u sixi lahayn cilladahan oo aan siin lahayn ogeysiis ku filan duuliyeyaashan, wixii isbeddello ah ee soo socda, ”ayuu yiri Thompson.